सिल नै नतोडिएको पिउने पानीको जार भित्र जिउँदो जुका भेटीयो ! « Online Tv Nepal
सिल नै नतोडिएको पिउने पानीको जार भित्र जिउँदो जुका भेटीयो !
Published : 13 March, 2020 12:29 pm
फोहोर, धुलो धुवाँ खानुपरे काठमाडौँ जानु भनिन्छ । गाउँघरका बुढा पाका र काठमाडौँदेखि हैरान परेकाहरुले फोहोर, धुलो धुवाँको कुरा गरिरहँदा काठमाडौँको महंगी र चर्को शुल्क हालेर यहाँ किनीने सामानहरुमा कति ढुक्क हुन सकिन्छ । ५० रुपैयाँ तिरेर किनेको सिल नै नतोडिएको पानीको जारभित्र जिउँदो जुका भेटीएपछि जारको पानीमा गरिने जनमानसको विश्वास भने टुटेको छ ।
भर परेर जारको पानी भन्दै खाने जो कोहीले पनि अब एक पटक यो भिडियो हेरेपछि सर्तक भने होलान् । प्रसंग हो काठमाडौंको बनस्थलीमा खिचिएको पानीको जारको भिडियो भित्र फेला परेको जुकाको ।बनस्थलीको रीता खाजा घरका सञ्चालक केदारनाथले पिउनयोग्य भनिएको पानी भित्र जिउँदो जुका भेटेपछि संचारकर्मीलाई खबर गरे । अक्वा नाइन्टी नाइन ९अक्वा ९९० नाम रहेको जारको त्रिकोण वेभरेज इन्डिष्ट्रिज को उत्पादन रहेको प्रशोधित पिउने पानी हो ।
४१४४३÷२०४३ दर्ता नम्बर रहेको त्रिकोण वेभरेजको सिल नतोडिएको पानीको जारभित्रै जुका हिँडिरहको देखेपछि उनको पसलमा जारको पानी भित्र हिँडिरहेको जुका हेर्नेको भिड नै लाग्यो । पानीमा जुका भेटिएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले बनस्थलीबाट उक्त पानी जफत गरी उद्योगमा सिलबन्दी गर्ने विभागले जनाएको छ ।